VAKY BANTSILANA : Manantena hatrany ny fahafahana marina… | NewsMada
Mampanahy tanteraka ny fihanaky ny covid-19: Tafakatra 22 ny maty, tranga vaovao 88 eto Analamanga ...juillet 2, 2020
Test de dépistage: Ruée vers le centre médical à Andohatapenaka ...juillet 2, 2020
Covid 19- Ho henjana ny fepetra fihibohana an’Analamanga: 6 ny maty, 429 no voa ny faran’ny herinandro
Reconfinement total à Analamanga: déploiement de 500 militaires
Ahina tsy ho voafehy intsony: 109 ireo nifindran’ny covid-19, olona roa hatrany ny maty
Covid-19: 433 nouveaux cas et 8 décès en 5 jours
Nirefodrefotra ny basy tao Toamasina: miaramila serzà ny roa tamin’ireo jiolahy lavon’ny polisin’ny Fip
Suspicion de Covid-19: les députés passent au test de dépistage
Mampanahy tanteraka ny fihanaky ny covid-19: tafakatra 22 ny maty, tranga vaovao 88 et Analamanga
Test de dépistage: Ruée vers le centre médical à Andohatapenaka
Natsipy tao an-tokotanin’olona ilay razana: vehivavy hita faty, voatsatoka antsy teo amin’ny tendany
Adoption de la LFR: les sénateurs font blocage
VAKY BANTSILANA : Manantena hatrany ny fahafahana marina…
Par Freenews sur 14/05/2017
Mitsingerina androany tokoa ny fahenin-taon’ny onjampeo Free Fm, 104,2. Miarahaba manokana ho azy ireo sy ny mpiara-miasa rehetra. Faly tokoa ny raozy raha tonga ny maraina, maitso mavana ny ketsa raha mirotsaka ny orana, fa faly sy ravo tokoa ny Vondrona eto amin’ny Free, miarahaba manokana ny Free Fm hahaleo hahalasana amin’ny adidy efa natombony sy efainy ary tsy maintsy mbola hotanterahiny. Haharitra ela indrindra, tahaka ny vatoben’Ambohimanga anie ny onjampeo Free Fm : “rakofan’ny haizina tsy hahatahotra, latsaham-baratra tsy toro, tanian’ny andro tsy ho haraka, ho zato taona ipetrahana, arivo taona honenana, haharitra ny taona rehetra mifandimby…Arahabaina e tratry ny andro malaza!!!”
Karazany miarahaba tena ihany anefa izahay, ao anatin’izao tsingerintaona izao, saingy mby amin’ilay fitenenan-drazantsika manao hoe : “manao ombay lalam-bady leiretsy a! ny an’ny hafa aza omem-boninahitra, mainka ve fa ny an’ny tena”. Mirary ny onjampeo Free Fm, izay mivoy hatrany ny fahafahana marina…Ny tongo-mamindra tsy ho solafaka, ny tana-mandray hahefa ny atao, ny vava miteny hahefa ny adidy; hivolana ho maro mpihaino, hiasa ho maro mpandrisika, andeha ho maro mpanaraka. Tsy ho dilan’ny sambatra sy manan-jara tahaka ny rano am-bodivondrona leiretsy a! Ririnina hangitsingitsy, fahavaratra ho vangian-kavana, lohataona ho mandim-bolo…
Ho antsika rehetra mpanaraka sy mpihaino ny onjampeo, 104.2, Free FM, misy ny fiaraha-mifaly ny amin’ity anio ity, etsy amin’ny Kianja ny Kanto Mahamasina, iarahana amin’ireo mpanakanto marobe. Antenaina ianareo rehetra tsy hihatakataka toa an’Ankaratra na hiolonolona toa an’Andringitra fa iara-kitopa toa rano eny Ikopa, iara-kilasy toa rano any Itasy, ny amin’ny fankalazana ny tsingerintaona fahenina izay. Ny rehetra samy manantena marina ny hahato ny fahafahana. Saingy mazava ny resaka, fa raha fanantenana tsy miaraka amin’ny asa, karazany nofy antoandro hatrany.
Mifanindran-dalana amin’izao fankalazana izao koa, ny faha-45 taon’ny 13 mey 1972, nisiana fitakiam-bahoaka tamin’izany fotoana izany. Goavana notakiana ny fanagasiana ara-pampianarana, indrindra indrindra ny fanovana ny rafi-panjakana sy ny fitondrana. Mbola nofinofy daholo ny fahatanterahan’izany hatramin’izao. Rafi-panjakana mangeja no iainana, mandraka ity ny androany. Manantena hatrany ny fahafahana marina anefa ny Firenena. Mitaky olona mivoy mandrakariva ny tena fahafahana i Madagasikara. Fanantenana avokoa izany voatanisa izany, saingy aleo maty manam-panantenana, toy izay velona mamoifo…
Vaovao tambatra 06/07/2020
Nandamoka ny grevy: tsy mahazo miasa ny taxi-be 06/07/2020
Nidina ny « droit d’accise »: nihena ny vidin’ny labiera Star 06/07/2020
Oniversite Ankatso: fiofanana sy fanodinana vatosoa 06/07/2020
Distrikan’Ankazoabo – Faritra Melaky: 200 Ar sisa ny vidin’ny tongolo any amin’ny mpamboly 06/07/2020
Brèves de LFR